Bifoota toowhidaa ti fi dhugaa inni qabu waan himbeeynef; akkasumas shirki�irra waan if qulqulleessu fedhuuf, akka gaafi tana naa deebiftan abdadha: Bifooti toowhida maal-guutu�utti gosa isaa mara naa ibsu�uun wajjiin?
Waan gaari fedhu Rabbi siif haa dabalu! Dhugumatti waan gaari fedhuu kanatti aqiidah keetitti yaaddahu�utti si qajeelcha. (Aqiidan) hunde dalagaan irratti ijaaramtu waan ta�eef, waan Aqiidah ifiitti yaadun kun dirqama Muslima mararra jiru. Kanaafu, dalagaan haala lama callaa dhan qajeela tahu dandeette minda�alle itti argatu dandahan.
Ka dura: Dalagaan aqiidah (shirki�irra) nagaya baatu taaterratti ijaaramu qabdi.
Haalli lammaffa�aa: Dalagaan waan ergamaan Rabbii (NRIHJ) karaa godheen wal-tahuu dha. Galata-Rabbi waa�e aqiidaah keetitti yaadu�u fi haalota toowhida beeku eeggatuun kee kun tolinna ati irra jirtu garsiisa-akkasumas fedhii kee ka haqaa fi aqiidah qajeela beeku fedhu kee garsiisa; kun dirqama nama Muslima hundarra jiru.
Ammoo waa�e haala toowhida ilaalchise toowhidi gosa sadihitti (qoodama):
Ka dura: toowhida rubuubiyya�a, hiikkan isa: dalagaa Isa (calla�aan maluun) Rabbi kophaa baasani(amanu), akka waa uumuu, waa razzaquu, jireessu, ajjeesu, miidhu, fayyadu fi waan kana malee jiru ka dalagaa Rabii (waan itti xindeeffamu irraa) qulqulluu fi ol�aana tahe. Kanaafu, muslimni ni amana Rabbi rubuubiyyah Isaa keessatti hiriyyaa hinqabu jecha.
Ka lammaffaa: Toowhidah uluuhiyyaah: inni Rabbi kophaa baasani gabbaru bifa gabbara Inni karaa godhee maraatin: ka akka salaatah, sooma, hajji, zakaah, du�aa�ii (kadhaa), nazri, wareega, fedhi, kajeela, sodaa fi haga dhuma waan ibaada (gabbara) tahe maraatin. Ibaadah kanniinin Rabbi kophaa baasani gabbaruun toowhidah uluuhiyyah jedhama. Bifti toowhida kun waan uumama Rabbi (hundarra) barbaachisa tahe.
Toowhida dura-toowhida rubuubiyyah ka jedhamu san uumami martinu ni raggaasisa, haga mushriktoota rasuulli itti ergame gahutti. Akkuma jecha Isaa keesstti Rabbi jedhu: osoo eennutti isin uume jette gaafatte, Rabbitti nu uume jedhan(Zukhruf 87). Jedhi (yaa Muhammad) eennu rabbiin samaa�i torbaani ti fi arshi cimtuu dha, (Rabbiitu uume isiin) Rabbi fi jedhan (Mu�iminuuna 86 fi 87). Aayatoonni (Qur�aana) ta mushriktoonni toowhidah rubuubiyyah raggaasisu�u isaani mulidhiftu (heddu�utti jira). Garuu wanni isaanirra barbaachisu yoo toowhidah rubuubiyyaah raggaasisan, toowhidah ibaadaati (uluuhiyyah ykn gabbara), dirqamni isaanirra jiru kana jechu achiin booda. Ergamtoonni hundinu wanni isaan itti waaman toowhidah ibaadaati, akkuma Rabbi jedhu (Qur�aana keessatti): Uummata hundatti ergamtoota ergine, Rabbi gabbara waan biroo ka gabbaramurra fagaadha (jechuu dhan) (Nahli 36). Kanaafu, ergamaan martu toowhida ibaada�atti nama yaaman. Ammoo toowhidi rubuubiyyaah uuma�attu ni argama. Garuu inni (kopha�atti) gayaa miti.
Ka sadeesso: Toowhidah maqoowwani fi sifoowwani: sun Rabi Ol�aana�af raggaasisu waan Isaaf rasuulli(NRIH) Isaa raggaasisan maqoowwanirra ykn sifoowwan Isaatirra. Akkasumas Rabbiin didu waan Isaa fi rasuulli Isaan didan; irdhinna ykn salphinnarra(Rabbi qulqullu tahu amanu). Kunniin gosoowwan toowhida sadeeni; ka beeku fi, itti dalaguu fi itti yaaddahuun muslimarra jiru.
Shekh :- Saalih ibn Faawzaan Al-Faawzaan
Gaaffi itti antuu =>